Ubuntu namaphrofayili: UDouglas Spotted Ukhozi | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » Ubuntu namaphrofayela: U-Douglas Spotted Ukhozi
I-Broadcast Beat'sI-NAB Bonisa New York Profiles ”uchungechunge lwezingxoxo nezingcweti ezivelele embonini yezokukhiqiza ezizobe zibamba iqhaza kulo nyaka I-NAB Bonisa INew York (Oct. 16-17, 2019).
NjengoMqondisi Wezinhlelo Zokufundisa zeSundance Media Group, uDouglas Spotted Eagle ungumqeqeshi oyinhloko we-UAS kanye nomeluleki wezimboni weSundance Media Group neVASST. Ungumculi owaziwayo, usomlomo / uthisha ohambahamba umhlaba wonke, futhi ugqamile kwezimboni zevidiyo nezomsindo, njengoba ethole umklomelo weGrammy e2000. Ngaphezu kwalokho, u-Douglas ungumlobi wezincwadi eziningi nama-DVD, futhi uyaqhubeka nokusebenza njengomeluleki kanye nomhlahlandlela wabaqondisi bevidiyo, abakhiqizi besoftware, nabasakazi. Manje ubheka amandla akhe nesipiliyoni sakhe ngaphakathi kwe-UAV / sUAS (Izithuthi Ezingavinjelwe Zomgwaqo / imboni encane). UDouglas wayengumsunguli wokubambisana weSundance Media Group e1996.
Ukuhamba esibhakabhakeni kusukela ku-2006 futhi kufundise i-UAS kusukela nge-2012, u-Douglas ungumthwebuli wezithombe osafufusa ophilayo emhlabeni ogcwele i-adrenaline videography esheshayo. Uqokwe njengoMeluleki Wezokuphepha Nokuqeqesha ezweni lezindiza, unguchwepheshe wezokulawulwa kwengcindezi / kunciphisa izihloko. U-Douglas uyi-audio and imaging pro enemiklomelo eminingi yemikhiqizo yakhe; ngolwazi olusondele kakhulu lwe-FAA FARs ne-FSIMs, umbono kaDouglas ukufaka iminyaka yakhe yokucabanga nokuhlwaya izindiza ezindleleni ezinhle kakhulu kukho konke okwenziwa yi-drone / UAV / UAS. UDouglas uyisikhulumi esihlala njalo futhi ofunisisa nge-UAV cinematography, ukuqaliswa kokuphepha komphakathi kwe-UAS, izinhlelo zezentengiselwano zezentengiselwano neze-UAV, ukuphathwa kwengozi ye-UAV, ukundiza ebusuku kwe-UAS, amasistimu wokuphepha emoyeni, kanye nokuqeqeshwa kwe107 ukuqinisekisa abashayeli bezindiza bayiqonda kahle imithetho ye-FAA.
Ngathola ithuba lokuxoxisana noDouglas ngaphambi nje kokuba athathe uhambo lokukhiqiza amadolobha amaningi ukusuka empumalanga kuya ogwini olusentshonalanga. Ngiqale ngokumbuza ukuthi waqala nini ukuba nentshisekelo ngomculo nokuthi ayengobani amathonya akhe. “Angikhumbuli isikhathi lapho umculo wawungeyona ingxenye ebalulekile yempilo yami,” kusho yena. “Ngikwazile ukuthatha izifundo ze-guitar ze-3 noma i-4 kwenye indawo ezungeze i-1970, kepha azange ngikwazi ngempela ukwenza kahle. Lapho ngiphenduka i-12, ngathola umtshingo we-Native American, futhi ngakhela umtshingo wami wokuqala kuleyo minyaka. Ngaleso sikhathi ngathonywa kakhulu ngabaculi abanjengoJean Luc-Ponty, uTomita, uDan Fogelberg noGentle Giant. ”
Ngaphezu kokuqopha ama-albhamu ambalwa, umsebenzi kaDouglas wezomculo ubuye wazihlunga ngawo kufilimu naku-TV. "Umculo wami, okuyi-standout emkhakheni ohlanganiswe kabusha we-filimbi / i-jazz, uholele ekutheni 'umculo we-needledrops [[prereordorded music used as a scging]] usetshenziswa kumaphrojekthi amaningi wethelevishini nawefilimu," echaza. “Ucezu lwami lokuqala lokushaya amaphuzu alwenzekanga kuze kufike i-albhamu yami yesithathu noma yesine, futhi bengijabule ngokusebenza noBrian Keane, ongumkhiqizi onama-Emmy amaningi. Ungifundise nobuhlungu bokuqamba amathrekhi ngendlela ehlukile kunangaphambili, futhi wangifundisa ukubekezela kwemininingwane ephansi. Mhlawumbe isipiliyoni esikhumbulekayo kunazo zonke kwakuwukuthola imibhalo kumaSami abantu bamazwe aseScandinavia, lapho ngaya endaweni yabo futhi ngachitha isikhathi esiningi phakathi kwabo. Elinye lamathrekhi liqoshwe esiteshini se-ABBA sikaBenny Andersson eStockholm. "
UDouglas ubhale izincwadi eziningana ezihlanganisa izifundo eziningi ezahlukene. Ngambuza ukuthi awuqala kanjani umsebenzi wakhe wokubhala. "Ubuhle bami .... .books," uphendule. “Bengihlala ngikuthanda ukufunda. Lapho ngisemncane, sasingenawo ugesi epulazini, ngakho-ke izincwadi zaziwukuphela kwemithombo yezindaba. Kuze kube muva nje, ikhaya lami ligcwele izincwadi kulo lonke i-nook ne-cranny. Ngibhale izincwadi ngamakhamera, kubuchwepheshe bokukhiqiza bokusakaza, izinhlelo zokuhlela ze-CMX, izinhlelo ze-NLE, ukukhanyisa, ama-codecs e-DV ne-HDV, ama-LDS Psychology / ukuzibulala, ama-Drones, weStround Sound, amasu we-Microphone, Parachuting… izincwadi ze-34 sezizonke. Zonke kuphela isikhungo sesihloko esisodwa sokuthwebula nokuthumela izithombe ezinhle kanye / noma nomsindo omkhulu. "
UDouglas unginike nokuqonda okuthile ngomsebenzi wakhe neSundance Media Group. “Ngisungule iSundance Media Group e1994 njengendlela yokuqeqesha abakhiqizi kanye nabaculi ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha bedijithali, njengeTurtle Beach neDigidesign. Ngathatha umlingani wami eminyakeni embalwa kamuva, futhi e-2012, umlingani wami wathengisa isabelo sakhe kumnikazi wamanje omkhulu wale nkampani, uJennifer Pidgen. Ivuswe kabusha njenge-'SGG, 'leli qembu manje linikezela cishe amakilasi we-100 ngezihloko ezahlukahluka kusuka ku-Audio Production kuya ezithombeni zasemanzini / ze-ROV.
Njengoba sekushiwo ngaphambili, uDouglas ungumthwebuli wezithombe osemoyeni, ngakho ngabuza ukuthi wazibandakanya kanjani kulowo mkhakha. “Umsebenzi wami we-sUAS / ividiyo yevidiyo ikhulile emsebenzini wami wokuba ngumdwebi wezithombe zasemoyeni. Noma ngabe ukundiza nge-Skymaster 210, ukuwa kwamahhala, noma ngaphansi kombhede, ukuthwebula izithombe zasemoyeni kuyangijabulisa. Ku-2010, ngithole leli thuluzi elisha manje elaziwa ngokuthi yi- 'drone, RPAS, sUAS,' futhi ngaqala ukuzilolonga nokufunda. Kungekudala ngemuva kwalokho, ngazithola ngifundisa izingxenye ze-SUAS kuba basakazi. Ku-2016, ngaphambi nje kwemigomo emisha yenhlangano, sakha amazinga wokuqeqeshwa we-sUAS wabasakazi, futhi sawethula ku-2016 I-NAB Bonisa. "
Umnikelo kaDouglas ku- I-NAB Bonisa INew York kulo Okthoba izoba umhlangano obizwa nge- “Creative Lightning on Budget,” ozobe wethulwa njengengxenye yengqungquthela yePost / Production. “Okokuqala I-NAB Bonisa ubese-1985 njengomuntu obekhona. Unyaka wami wokuqala njengomethuli yi-1997, futhi bengilokhu ngibonisa njalo ngonyaka kusukela ngaleso sikhathi. Akungatshazwa ukuthi ubudlelwano bami nabo I-NAB Bonisa ithuthukisile futhi yanika amandla umsebenzi wami. Ngethulwa kuJames Cameron, Dean Devlin, Jodi Eldred, Sony, IPanasonic, RedRock Micro, FoxFury, amakhulukhulu amaklayenti wokusakaza ngenxa ye I-NAB Bonisa. Ngenye yezikhungo ezibaluleke kakhulu emsebenzini wami, ngisho nangemva kweminyaka ye-40.
“'Ukukhanyisa i-Creative Budget' kuzokhombisa ababekhona ukuthi siyiphathe kanjani ngempumelelo iveni yokufaka isikhwama esikhwameni esisodwa esingangena emgqonyeni wezibi. Ngiphathe lolu hlelo — nezinye izinhlelo ezifanayo — ziye eMt. I-Everest, ukubhuka okuningi, nezinye izindawo lapho amandla engekho, noma engasebenzi ngobukhulu. Ngizokhombisa ukuthi izindleko ezingabizi kakhulu zokukhanyisa ama-micro-light zingabizi kangakanani-kepha ngaphandle kokuyekethisa — izindlela zokukhanyisa isethi esincane, inhlolokhono, umcimbi wokubumbana, njll. Izilaleli ezihlosiwe yinoma ngubani obamba iqhaza ezindlekweni 'zomsunguli'-umakhi womakhi , finyelela imibhalo yesibhamu, izingxoxo zezinkampani, izinhloko ezikhulumayo, noma abasebenzisi bama-video amancane noma izinhlelo zokukhanyisa izithombe. "
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba I-2019 NAB Bonisa I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza UDouglas Spotted Ukhozi I-NAB I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB Bonisa NAB16 nabshow sUAS ISundance Media Group I-UAV 2019-10-10
Ngaphambilini: I-Broadcast Solutions Yokufaka Imakethi Yezimoto Ezisetshenziswa OB ngensizakalo entsha
Olandelayo: I-US Technology Firm Variant Systems Group Ithola Ukutshalwa Kwamasu kusuka ku-FOR-A Company Limited